Uchwepheshe we-Semalt: Imibhalo ye-Alt ne-Title. Kungani Kubalulekile?
Abantu abasebenzisa isofthiwe ye-Raven bafuna ukwazi umehluko phakathi kombhalo wetekisi namathegi e-alt. Kulabo abasebenzisa i-WordPress, amamojula wokulayisha izithombe anika izikhala zamagama-magama, izihloko, izincazelo kanye ne-Alt Text. Ungasebenzisa noma ungasebenzisi amagama angokhiye ofanayo nesithombe sombhalo; ngokufanele, kufanele ufake imishwana yegama elingukhiye elifanele noma ungashiya isihloko esingenalutho.
Kulesi sihloko, uNik Chaykovskiy, iMenenja yeMpumelelo YokuThengela Amakhasimende uSemalt uzokujwayela ngezinzuzo ezihlukahlukene zokwengeza i-alt kanye nesihloko sombhalo ezithombeni.
Sebenzisa amathegi e-al:
Akubandakanyi amathegi e-alt ingenye yeziphambeko ezivamile ze-SEO. Akumelwe ukhohlwe ukuthi izinkampani zokusesha kanye nezirobhothi abakwazi ukukhomba izithombe ngaphandle kombhalo. Futhi, ungaphuthelwa amathuba okuthuthukisa okuqukethwe kwakho nezithombe. Ukungabhalisi izithombe kuyisimo esibi somsebenzisi kunoma ubani okhubaze izithombe kusiphequluli sakhe. Futhi, akulungile kubantu abanokukhubazeka kwengqondo nokubukwa. Ngokusho kweWorld Wide Web Consortium, amathegi e-altare ahlukile kumbhalo futhi abantu abanokukhubazeka okubukwayo bangazuza kubo. I-agent yomsebenzisi, i-Googlebot, ayikwazi ukubona izithombe ngqo, ngakho-ke inquma uhlobo lwezithombe zakho ngamathegi e-alt..Ngaphezu kwalokho, umbhalo we-alt usiza abantu abangaboni kahle ukuthi baqonde kalula amawebhusayithi. Kumuntu okhubazekile, umbhalo we-alt uzofundwa ngumfundi wesibuko.
Sebenzisa Izitifiketi Zesihloko:
Izimfanelo ze-altare zelabo abafuna ukusesha injini, kuyilapho amathegi wethimba aqondene nabafundi babantu. Ngakho-ke, ungabhala isihloko sombhalo nesigatshana sombhalo njengokushaya ucingo ukuze wenze abafundi benze. Umbhalo ofanayo ungasetshenziselwa ukushayela ithrafikhi eyengeziwe kusuka kumaphrofayela akho wezokuxhumana.
Ngingayikhophi i-Alt ne-Text Text?
Uma unamakhasi amaningi enezithombe eziningi, ungasebenzisa amagama angukhiye ahlukene nemishwana esikhundleni samathekisthi e-alt kanye nesihloko. Kodwa akufanele ukhohlwe ukuthi ukugxila igama elingukhiye kubi futhi kufanele kugwenywe nganoma yikuphi izindleko. Kunalokho, kufanele unikeze imininingwane ngemifanekiso futhi ufake igama elingukhiye eliyinhloko. Zama ukusebenzisa amagama angukhiye ahlukile kanye nemishwana kokubili isihloko kanye namathegi e-alt. Okufanelekile, izihloko zesithombe kufanele zilandele umthetho ofanayo wezihloko zokubhala ezijwayelekile noma izihloko ze-athikili - kufanele zifinyelele, zikhangele futhi zifanele.
Ngingayisebenzisa I-Alt ne-Text Text ku-Website Audit?
Uma usebenzisa i-Raven's Site Auditor, ikhasi lakho lokufinyeleleka lizobonisa imiyalezo ephutha ehlukile. Amaphutha amaningi angumphumela wezingcaphuno ezingenalutho neziphindaphindiwe ezithombeni ezithombeni. I-Raven njalo amafulegi afana nalezi zithombe ukuxwayisa abasebenzisi futhi ubanikeze ukwaziswa kwenkinga. Uma isayithi lakho lingamakhulu ezinkulungwane zekhasi, awukwazi ukwenza izinguquko wena futhi kuzodingeka uqashe i-SEO. Ngaphandle kwalokho, kufanele ungabandakanyi amathekisthi e-al and title kusuka kumbiko we-Auditor's site. Ukuqhubekela phambili, kufanele ufake amagama angukhiye kumafayili wezithombe futhi akufanele usebenzise isihloko esifanayo nezici ze-alt. Ngaphezu kwalokho, kufanele unake izinga lezithombe zakho futhi ugcine usayizi wabo ube mncane.